It is me. Ko Niknayman.: ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို အတွင်းမှာရှာ ( ညီညွတ်ခြင်း အပိုင်း ၃)
ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို အတွင်းမှာရှာ ( ညီညွတ်ခြင်း အပိုင်း ၃)
Unity Part III ကို ဆက်ပြီး ရေးမိပြန်ပါပြီ။
ဆရာလုပ်နေသည်ဟု မယူဆစေချင်ပါ။ ရင်ထဲမှ ပေါက်ဖွားလာသော စေတနာကို မြင်စေချင်ပါသည်။ မသိသူများဟု ယူဆ၍ ရေးနေခြင်းမဟုတ်။ (သိသူများ၏) သိပြီးသား အသိပညာတွေကို ပြန်၍ အစဖော်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
နအဖသည် ပညာဥာဏ်ကြီးသူများကို အလွန်ကြောက်သည်။ သူတို့က ပညာဥာဏ်မဲ့သူ (ဗာလာနံ) လူမိုက်တွေ ဖြစ်နေသည့်အတွက် (ပညာကို ကြောက်သည်။ ပညာမရှိ။) ထို့ကြောင့် လက်နက်ကို အားကိုးသည်။ ခွန်အားကို အားကိုးသည်။ အကြမ်းဖက်ခြင်းကို (၉၆) ပါး ရောဂါ ကုစားစရာဆေးအဖြစ် သုံးနေကြသည်။ ဒါ လူမိုက်လက္ခဏာများပင်။
" ကိုယ်တည်းတစ်ယောက်၊ ဆင်းရဲရောက်၍
တစ်ပါးဖြစ်ထွေ၊ ဆင်းရဲစေတော့။ "
ဆိုသည့်အတိုင်း အများအတွက် မိမိအသက်ကို စွန့်ဝံ့တဲ့ ဘုရားအလောင်း မျောက်မင်းလို ပညာရှိ ခေါင်းဆောင်များ၏ ခေါင်းဆောင်မှုဖြင့် ပြည်သူအများ အသိဥာဏ်နိုးကြား၍ ခေါင်းထောင်လာမည်ကို အလွန်ကြောက်သည်။ အမှားပေါင်းစုံ ကျူးလွန်ထားသူပီပီ ကိုယ့်အရိပ်ကိုယ် လန့်နေကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးတင်ဦး၊ ကိုမင်းကိုနိုင် . . . . . အစရှိတဲ့ . . . အများအတွက် မိမိတို့ရဲ့ အသက်တွေ၊ ဘ၀တွေကို စွန့်လွှတ်ရဲတဲ့ ပညာရှိခေါင်းဆောင်များကို (ဗာလာနံ - နအဖ) တို့က ချုပ်နှောင်ဖမ်းဆီးထားပြီး လူထုခေါင်းဆောင် ပျောက်အောင် လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် သူတို့လိုရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ယူဆကြသည်။
ဒီ လူမိုက်တွေ ပြည်သူလူထုကို အထင်သေးလွန်းသည်။ သူတို့က လူမိုက်များပီပီ ရုပ်ဝတ္ထုများကိုသာ မြင်တတ်ကြသည်။ (ပုဂ္ဂိုလ်/ရုပ်ဝတ္ထု) များ ဖြစ်ကြတဲ့ ဒေါ်စု၊ ….. ကိုမင်းကိုနိုင် တို့မရှိလျှင် လူထုကြီးတွင် ခေါင်းဆောင်ကောင်း မရှိနိုင်တော့ပြီ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ မရှိတော့လျှင် ဒီဗမာနိုင်ငံကို သူတို့ လူမိုက်တွေ ထင်သလို ခြယ်လှယ်နိုင်မည်ဟု ထင်နေကြသည်။ အလွန် သနားစရာကောင်းတဲ့ နအဖ ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပညာဥာဏ်မဲ့လွန်းလှသည်။
ဤတိုင်းပြည်ကား ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားသော တိုင်းပြည်ဖြစ်သည့်အလျှောက် ဗုဒ္ဓ၏ သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ဖြင့် အသက်ရှင်နေကြသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်များ များစွာရှိသည်ကို သူတို့လို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အယောင်ဆောင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ မသိနိုင်၊ နားမလည်နိုင်ကြပါ။ (ဒွိဟိတ်) လူသား သူတို့ကိုယ်တိုင်ပင် သနားစရာဖြစ်နေမှန်း သိပင်မသိနိုင်ဘဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့ လူတော်များဟူ၍ သွေးနားထင်ရောက်နေကြသည်။
ကျနော်တို့၏ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများကား ကျနော်တို့ကိုယ်စီ၏ (အဇ္ဈတ္တ) အတွင်းစိတ်သန္တာန်တွင် ရှိကြသည်ကို သူတို့မသိ ……. လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများသည် အပြင်မှာ မဟုတ်ပါ။ အတွင်းမှာသာ ဖြစ်သည်။
ဒေါ်စုကို ဖမ်းထားလို့ကော ကျနော်တို့မှာ ခေါင်းဆောင်မရှိတော့ဘူးလား …. ဦးဝင်းတင်၊ ဦးတင်ဦးတို့ကို ဖမ်းထားလို့ကော ကျနော်တို့မှာ ခေါင်းဆောင်မရှိတော့ဘူးလား …. ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို ဖမ်းထားလို့ကော ကျနော်တို့မှာ ခေါင်းဆောင်မရှိတော့ဘူးလား ….
ပညာရှိသော ကျနော်တို့ တစ်ဦးစီ၏ အတွင်းစိတ်သန္တာန်တို့သည် ကျနော်တို့၏ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများပင် ဖြစ်သည်။
ထိုအတွင်းစိတ်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ကျနော်တို့ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေခြင်းမျှသာ . . . ဒါက မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ . . . နာမ်သတ္တိက စေ့ဆော်မှ ရုပ် လှုပ်ရှားရသည်ချည်းသာ။ ပညာမဲ့သူတို့သည် ပြင်ပခေါင်းဆောင်ကိုသာ မြင်ပြီး ပညာရှိသူတို့က မိမိ၏ ဥာဏ်ပညာသည်ပင်လျှင် (အကောင်းအဆိုး၊ အကြောင်းအကျိုး၊ အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားသိသော အသိဥာဏ်သည်ပင်) ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဧကန်ဖြစ်သည်ဟု …. သိရှိကြသည်။
(ကျနော်တို့ ဒေါ်စု၊ …. ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ မရှိလျှင် ဘာမှ မလုတ်တတ်တော့ဘူးလား။ ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလား)
မဟုတ်ပါ။ လူတိုင်း ကိုယ်စီ ကိုယ်လုပ်နိုင်သည့် တရားသော ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်မှုကိုယ်စီကို ပညာဥာဏ်နှင့် အချိန်တိုင်း လုပ်နိုင်ပါသည်။
(သတိပြုရမည်မှာ - ဓမ္မဖြစ်ဖို့လိုသည်။)
အဓမ္မကို တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မေးမနေပါနဲ့။ သူတပါး၏ တွေးထင်မှုက မိမိရဲ့အမှန်တရား မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မိမိရင်ထဲက ဓမ္မနဲ့ယှဉ်တဲ့ (တရားရဲ့လား၊ မှန်ကန်ရဲ့လား၊ ဘယ်လောက်အကျိုးရှိသလဲ၊ ဘယ်လောက်အကျိုးမဲ့နိုင်သလဲ) ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကိုယ်တိုင်ပြန်မေး။ ပြီးတော့ လုပ်နိုင်တာမှန်သမျှကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး လုပ်၊ အဖွဲ့အစည်းမရှိလို့၊ ခေါင်းဆောင်မရှိလို့ အားငယ်စရာမလိုဘူး။ ကိုယ့်ရင်ထဲက ဓမ္မနဲ့ယှဉ်တဲ့ဥာဏ်ကို ခေါင်းဆောင်တင်။ ပြီးတော့ လုပ်နိုင်တာမှန်သမျှ အကောင်းဆုံးသာ လုပ်ပေတော့။
"အဓမ္မ" တွေ မလွှမ်းမိုးဖို့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် "ဓမ္မ" အတွက်ဆိုတဲ့ နှလုံးသွင်းမှုနဲ့ အင်အားကို အကုန်သုံး။ အဲဒီလို "ဓမ္မ" အတွက်ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့ တမျိုးသားလုံး၊ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး တက်ညီလက်ညီ ကိုယ်နိုင်ရာ တာဝန်ကို ကိုယ်စီ ယူကြမယ်ဆိုရင် . . . . . . . . . . . . .
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေ ယူဆသလို ပြင်ပခေါင်းဆောင်မရှိတော့ရင် သူတို့နိုင်ပြီ၊ သူတို့လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ရပြီလို့ တွက်ချက်မှုဟာ မှန်နိုင်ပါတော့မလား။ နေရာတိုင်းက တိုက်နေတဲ့ ပြောက်ကျားစစ်ဆင်မှုကို ခံနိုင်ပါ့မလား။
ကလျာဏအနွယ်ဝင် သူတော်စင် ပညာရှိအပေါင်းတို့ ခင်ဗျား ….. မိစ္ဆာတွေကို တွန်းလှန်ဖို့ ကိုယ့်အတွင်းသန္တာန်က ခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့ လူတိုင်းကိုယ်စီ နိုင်ရာဝန်ထမ်းရင်း တက်ညီလက်ညီ တော်လှန်ကြပါစို့။
Posted by အာဇာနည် at 12:38 PM
'Wake Up' by Lo-Star - Benefit single for Burma Ca...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လမ်းရှောက်ပွဲ မှတ်တမ်းများ..
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မှတ်သားဖွယ် သမ...
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ( င်္ကြ့ဖွတ် ) သို့ မဟုတ် စစ်အာဏာရှင်...
နအဖ ၏သမိုင်းကို လေ့လာခြင်း (အမျိုးသားရေးမို့ဒို ...
နအဖစိတ်ကြိုက်ရေး တဲ့ နိူင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်း အုပ်ချုပ...
တရား ဓမ္မ မဲ့ နေတဲ့ ဒို့ တိုင်းပြည်။
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် သင့်ကို အရေးတကြီး အလိုရှိ...
ဆရာတော်ဦးပညာဝံသ ၏ နယူး ဇီလန် ခရီးစဉ်
မြန်မာပြည် အခြေအနေ ( ၃။ ၂၇။၂၀၀၈)
Partition ခွဲကြစို့ ( ညီညွတ်ခြင်း အပိုင်း ၅)
သီးလေးသီး ရဲ့ တကျော့ပြန် စင်္ကာပူ
FREEDOM WALKERS'S ဒိုင်ယာရီ.. ( ၃။၂၆။ ၂၀၀၈)
၆၃ နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ 
မြန်မာနိူင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့သာမဂ္ဂီအဖွဲ့ ချူပ်နှ...
ခွေးလောက်တောင် အသိတရားမရှိကြသော နအဖမိစ္ဆာဒိဌိများ။
ဘုန်းဘုန်းချမှ လုံးလုံးရမယ် (သံချပ်)
အခမဲ့ ခလေး လုပ်အားပေး အလုပ်သမားလေး များ..
အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်ပြီး အဆိုးဆုံးကို ပြင်ဆင်...
ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို အတွင်းမှာရှာ ( ညီညွတ်ခြင်း အပ...
တပ်ပေါင်းစု အထွေထွေသပိတ် တိုက်ပွဲကော်မတီ ၏ကြေညာခ...
တောမီးလောင်ရင် တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ်လိမ့်မယ်( ညီည...
လူထုတရပ်လုံးအတွက် စတေးခံ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖွဲ့ေ...
လူ့ အခွင့်အရေးနေ့ လှုပ်ရှားမှူများ ( နဂိုရာ. ဂျပန်...
မန္တလေးတွင် မီးထပ်မံလောင် ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျင်ကြီးစွန့်ချင်စွန့် ကျင်ငယ်တော့မစွန့်နဲ့ ( ညီညွ...
အများစုဆန္ဒ စုဆန္ဒ မှ စုဆန္ဒ အများစုဆန္ဒ သို့
နယူးယောက်မြို့ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး (၆)လမြောက်...
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး (၆) လပြည့် အခန်းအနား (တိုရ...
လူထုဆန္ဒပြပွဲများကို နှိမ်နင်းချေမှုန်းရန်အတွက် နအဖ ...
UN Security Council Report of Myanmar ( Burma)
ကုလအထွေထွေညီလာခံ ဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာ့အရေး သက်ဆိုင်သူတွေအား...
ဒို့ တိုင်းပြည်မှာ ဒါတွေဖြစ်နေပြီ.ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှ...
နအဖ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမူကြမ်းမှာ ဒါတွေပါတယ်
20th HR Day of Burma and Red bridge Day celebrated...
ကမ္ဘာအေးဘုရားကို လုံထိန်းများ ဝိုင်းထားကြပြီ။
ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ အကြံပေ...
NLD ၏ ထုတ်ပြန်ကျေညာချက်
မတ်လ.၁၃ ရက် မေ့မရ..သွေးမြေသက်.အထ္ထုပ္ပတ္ထိ..
သူတို့ ဘဲ ရှုံချည်နှပ်ချည်..မရိုးသားသောလူ ပလီ
အမြွာပူးမို့ ထောက်ခံမဲနဲ့ မကူနိုင်
၈၈၈၈ ခွပ်ဒေါင်းများ၏ တိုက်ပွဲတွန်သံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး လော..အမှန်တရားရ...
ှSPDC အား မတရားအသင်းကြေငြာရန် ကိစ္စ
PDF Files များ download လုပ်ရန်
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားသမဂ္ဂ၏ နှစ် ၂၀ မြောက်တံတ...
ABSDF ၏ ၂၀၀၈ မြန်မာ့နိူင်ငံလူအခွင့်အရေးနေ့ ထုတ်ပြန...
အတ္တဟိအတ္တနော.နာထော၊ မိမိကိုယ်သာကိုးစား၊ လွတ်မြောက်ေ...
ဂမ်ဘာရီခရီးစဉ်အပြီး ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာ့အရေး ဆက်ပြီး ဖ...
ပူဇော်ထိုက်သူကို ပူဇော်ခြင်း။ ကလော်ထိုက်သူ ကို ကလေ...
၂၀ နှစ်မြောက် ကိုဘုန်းမော် နေ့ ( မြန်မာနိုင်ငံ လူအ...
နှစ် (၂၀) ပြည့် လူ့အခွင့်အရေးနေ့ (တံတားနီအတိမ်းအမှ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်အနား သေနတ်ပစ်ခတ်မှုတစ်ခု ဖြ...
ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပမည့် နအဖသည် ရိုးသားမှု အလျ...
အလုပ်နဲ့ အရင်သက်သေပြမှ ယုံရမည်ဖြစ်ပါသည်။